Ungasebenzisa ubuchwepheshe be-Presto Automation ukwandisa impumelelo yakho yokukhiqiza. Kusukela ekuqeqeshweni kokuqala kwemishini, ngokuqeqeshwa okuqhubekayo kokusebenza, kuya ekubonisaneni ngomkhiqizo, i-Presto Automation inolwazi lobuchwepheshe nokusebenza okudingakalayo ukuqinisekisa ukuthi inqubo yakho yokukhiqiza ihamba ngokushelela nangokusebenza kahle ngangokunokwenzeka.
ISINGENISO ESIPHELELE KU-PRESTO AUTOMATION TECHNOLOGY
Kumakhasimende amasha ku-Presto Automation, sinikeza izinkulumo ezahlukahlukene eziyisisekelo. Sisebenzisa imishini yethu yesimanje yokuqeqesha, ochwepheshe bethu baxhumanisa ithiyori nomkhuba wangempela. Amakhasimende ethu avela ngokuzethemba ekusebenzeni kwemishini yawo, nangabasebenzi abazimele, abagxile kokuqondiwe.
ZUZA KOKUHLangenwe nakho Kwethu
Hlela ukubonisana nomunye wochwepheshe be-Presto Automation, futhi ufunde ukuthi ungahlangabezana kanjani nezidingo zamakhasimende akho ngokushesha okukhulu nangokubiza kakhulu. Funda ngokubonisana okwenzelwe izidingo zakho ezithile ukuthi ungawenza kanjani kahle umsebenzi womsebenzi wezinhlelo nowokusebenza, ukuthi ungayinyusa kanjani impilo yensiza yamathuluzi akho, nokuthi ekugcineni ungakhuphula kanjani umkhiqizo wohlelo lwakho lwePresto Automation.
I-Presto Automation iphinde inikeze ukuqeqeshwa okwenziwe endaweni (endaweni yakho) okuzokhombisa izidingo ezithile zohlelo lwakho, kanye nezimpawu ezibalulekile zengxenye yento oyenzayo. Uzothola ukuqonda okuphelele kuzo zonke izinzuzo zePresto Automation.
Sinikezela ngezinsizakalo nokubonisana ezindaweni ezilandelayo:
● Ubuchwepheshe bemishini namathuluzi
● Ukwakhiwa kwamathuluzi
● Izinhlelo zokulawula nezinhlelo
● Ukusebenza komshini
● Inqubo yokwakhiwa nokwakhiwa
● Ukuxazulula inkinga
Imishini ye-Presto Automation yaziwa ngokuthembeka kwayo. Kodwa-ke, uma kuvela inkinga, ochwepheshe bethu abaqeqeshiwe kakhulu bakusiza. Ochwepheshe bethu bazoxilonga inkinga, benze isixazululo futhi benze insizakalo edingekayo kusistimu yakho ye-Presto Automation ngokushesha nangempumelelo. Inhloso yethu ukuqinisekisa ukuthi umkhiqizo wakho uhamba kahle, nokuthi sihlangabezana nokulindelwe ngamakhasimende ethu.
Funda kabanzi mayelana ne- Izinsizakalo Zokusekela Amakhasimende
Sicela uzizwe ukhululekile ukusithinta nganoma yimiphi imibuzo ongaba nayo ngokushayela ku- +86 180 1884 3376.